Ukuhamba nokuvakasha - Izinsizakalo Kubantu Nezinkampani
Okweminyaka engaphezu kwengu-100 izihambi zase-Italy zisebenza kuwe
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-32)
I-Federalberghi Palermo ukuthathwa kwesifundazwe kwe I-Federalberghi Sicilia futhi imele ukuhlangana kwe hoteliers endala kakhulu futhi eyaziwa kakhulu e-Italy; izibophezele ekuvikelweni kwe abashayeli bezokuvakasha ikakhulukazi hoteliers usebenzela ukukhuthazwa nokuthuthukiswa kwe-ibhizinisi lokuhlala endaweni, kuleli cala ku I-Palermo nesifundazwe sayo.
I-Federalberghi Palermo - eceleni kwama-hoteliers
I-Federalberghi Palermo ihlose ukuthuthukisa izintshisekelo zezomnotho nezenhlalo ze osomabhizinisi abavakashi kanye nokukhuthaza ukuqashelwa kweqhaza labo kwezenhlalo, isiqiniseko somnotho wabavakashi, ukukhushulwa kokuhlinzekwa kokuhlala kwabavakashi endaweni yesifunda futhi ikakhulukazi esifundazweni Palermo. I-Federalberghi Palermo imele izidingo nezincomo zamabhizinisi wamahhotela aya kwizikhungo zezepolitiki, ezomnotho nezentengiselwano kanye nezinhlangano zezinhlangano.
I-Federalberghi Palermo - Siyakwazisa ukuvakasha kweTerritorial
I-Federalberghi Palermo unenhlanhla enhle yokumela abashisa izikhotha endaweni enhle njengeSisily futhi ikakhulukazi ePalermo naseSifundazweni; idolobha elingaphelelwa isikhathi elinemisuka yalo emlandweni obaluleke kakhulu weMedithera, izindlela ezi Ubuciko - Umlando - Amasiko namasiko okubalulekile okusukela ekudlaleni kwasekhaya kuya ekudleni okuhle nakho konke lokhu I-Federalberghi sikubheka njenge "Sipho Esiligugu" sangempela ukuvikela - Ngcono - Ukuthuthukisa ukudala izimo ezifanele zokuvakasha okuqhubekayo nokuhloniphayo kobukhazikhazi obungaka, amandla okuqhubela phambili wentuthuko kanye nokuqashwa kwensimu nazo zonke izindawo zokuhlala nabaqhubi izivakashi ezisebenza I-Palermo nesifundazwe sayo.
Federalberghi Palermo - Umhlaba Wezinsizakalo Zokusekela AmaHoteliers
I-Federalberghi njalo kuthunyelwa emkhakheni ezingeni likazwelonke ukunikeza amalungu ayo izinsizakalo eziwusizo nezokhonkolo zokuwaxhasa ebhizinisini lawo; futhi ezingeni lesifunda le-Federalberghi Palermo kungumsebenzi wosuku zonke ukwenza ubambiswano nezinkampani zephrofayili ephezulu kanye nezikhungo ukunikela ngezinsizakalo zalo ezihambisana nabo kakhulu futhi ezimweni eziningi zibasekele ngokuqinile kwezinye izigaba zebhizinisi labo.
I-Federalberghi Palermo - Ubuchwepheshe kanye nesipiliyoni ku-Service yakho
IFederalberghi Palermo isanda kuba ngumphikisi wemicimbi ebalulekile yokuphakanyiswa kwendawo ngokuhambisana nokuphathwa kwasekhaya, iphinde futhi yathuthukisa imicimbi yamazwe ngamazwe ukuletha indawo ebonakalayo kwenye yezindawo ezicebe kakhulu emlandweni nakanjani amadolobha amakhulu kunawo wonke endaweni yaseMedithera. Uma ungumnikazi wendawo yokuhlala noma ungumsebenzi wokuvakasha ungasithinta nganoma yisiphi isidingo noma imininingwane futhi siyojabulela ukubeka bonke ochwepheshe bethu nesipiliyoni onaso.
ye-Google: Qalisa i-Navigator
Ikheli: I-Via Libertà, 37 / i
I-POSTAL CODE: 90139
Ucingo: 091 6111948
Yefeksi: 091 6110754
I-Google +: Silandele kusuka lapha
-YouTube: Bhalisela isiteshi sethu
Inombolo ye-VAT: 97021720822